Sweden oo isku diyaarineysa Xiritaanka Qeybo kamid ah Wadanka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden oo isku diyaarineysa Xiritaanka Qeybo kamid ah Wadanka
Sweden oo isku diyaarineysa Xiritaanka Qeybo kamid ah Wadanka
February 17, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Dowladdu Sweden ayaa isku diyaarineysa inay xirto xarumo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xarumaha dukaamaysiga, maqaayadaha, goobaha jimicsiga.
Wasiirka arrimaha bulshada, Lena Hallingrin, ayaa ku sheegtay, shir jaraa’id in yar ka hor, in dawladdu ka walaacsan tahay halista muuqata ee mawjadda saddexaad ee fiditaanka cudurka Corona.
“Waxay noqon kartaa mid ku habboon in la xiro qaybo ka mid ah Iswiidhan,” ayay raacisay Hallingren.
Dowlada ayaa shaacisay ujeedkeeda ah inay hirgaliso shan talo soo jeedin cusub oo uu taageeray sharciga Corona, kaasoo u ogolaanaya inay qaado talaabooyin adag. Soo-jeedinta waxaa loo diri doonaa la-tashi, oo ay ka mid yihiin: Xiritaanka meherado badan sida xarumaha wax laga iibsado, maqaayadaha iyo goobaha jimicsiga. Iyo xaddid helitaanka boggaga internetka qaarkood. Iyo xaddidida howlaha jardiinooyinka madadaalada, xadiiqooyinka Matxafyada iyo qolalka farshaxanka.
Nidaam cusub oo loogu talagalay isu imaatinka dadweynaha iyo dhacdooyinka waxaa ka mid ah dejinta saqaf ka duwan tirada dadka iyadoo ku xiran xaaladda cudurka. Ugu badnaan 8 qof oo ka mid ah kulamada dadweynaha ayaa aad ugu nugul soo jeedinta cusub. Tan macnaheedu waa isbadal ugu badnaan oo kuxiran halista faafitaanka cudurka iyo ku saleysan qeybaha kala duwan sida: isku imaatinka gudaha, kuraasta, banaanka, tartamada isboortiga.
Dawladdu waxay hadda ka sugeysaa Hay’adda Caafimaadka Dadweynaha inay soo gudbiso ra’yigeeda ku aaddan soo-jeedinta ugu dambeyn 26 Febraayo. Soo-jeedimaha ayaa la filayaa in la dhaqan-geliyo laga bilaabo Maarso